HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tankarana Tarasque Tiorka Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Vezo Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Vao maraina be amin’ny fito latsaka fahefany ny andro. Tsara ny andro ary misy ranomandry manify manarona an’ilay farihy kely any Tuxedo, New York. Ireny fa misy lehilahy sy vehivavy matanjaka maromaro manao akanjo sy kiraro fitondra miasa, miditra ao amin’ilay trano misy rihana efatra mifanila amin’ilay farihy. Avy any an-trano sy avy any amin’ny hotely ary toerana samihafa izy ireo. Misy avy any Patterson, Wallkill, ary ny sasany aza avy any Brooklyn, izay 80 kilaometatra eo ho eo avy eo Tuxedo.
Tsy vao tamin’io andro io anefa ny ankamaroany no tonga tany New York fa efa elaela, ary avy any amin’ny lafivalon’i Etazonia. Nanolo-tena an-tsitrapo hiasa any izy ireo. Ny sasany mandritra ny herinandro, ny hafa iray volana sy tapany, moa ny sasany ela kokoa. Izy ireo ihany no niantoka ny saran-dalany. Tsy mandray karama amin’ny asa ataony any koa izy ireo nefa faly erỳ.
Roapolo amby zato eo ho eo aloha ny mpiasa an-tsitrapo tamin’izay na dia mety hiampy aza izany mandritra ireo volana ho avy. Mankao amin’ny efitra fisakafoana izy ireo ary mipetraka tsifolofolo. Maro no misotro kafe. Manentohento avy any an-dakozia any ny fofona henan-kisoa natono. Amin’ny 7 ora katroka izy ireo no manaraka ny fandinihana andinin-teny avy ao amin’ny Baiboly, amin’ireo efijery. Aroso ny sakafo maraina, fahefak’adiny aorian’izay. Mofo sy atody ary avoanina no miaraka amin’ilay henan-kisoa natono. Sakafo izany ka sakafo!
Faranana amin’ny vavaka ny sakafo avy eo, ary samy mamonjy ny asany ny rehetra. Falifaly erỳ ny mpanao fanorenana mifampiresaka sady mampiditra ny satroka aro loza, ny solomaso miaro ny masony, ny akanjo misy loko mora hita, ary ny fehikibo feno fitaovana.
Fa inona tokoa moa ny asa atao eto? Hovana ho toerana fametrahana ny fitaovana sy zavatra ilaina amin’ny fanorenana ilay toerana. Ny Orinasa Iraisam-pirenena Mpanao Taratasy mantsy no teto taloha ary haorina any Warwick, tanàna tsy dia lavitra eto, ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah. Hanaovana efitra fonenana, birao, trano fiasana, ary toerana fanatobiana fitaovam-piasana ireo tranobe efa teto. Tamin’ny talata 12 Martsa 2013 no neken’ny tompon’andraikitry ny fanajariana ny tanàna ny mari-trano hanaovana an’i Tuxedo.
Raisina tsara ny mpiasa an-tsitrapo rehefa tonga. Hoy i William, avy any New Jersey: “Vao tonga ianao dia atoro anao izay zavatra rehetra ilainao ho fantatra, izany hoe ny efitranonao sy ny toerana samihafa ary ny fomba fampiasana lakile. Manampy anao daholo ny olona. Rehefa tonga eto Tuxedo ianao, dia mihaona amin’ny mpiandraikitra ny asanao aloha rehefa avy misakafo maraina, ary hazavainy aminao izay tokony hataonao.”
Ary hoatran’ny ahoana ny miasa eto? Mamaly an’izany i Yajaira. Avy any Porto Rico izy sy ny vadiny ary manampy amin’ny fanaovana rindrina plakôplatra sy zavatra hafa. Hoy i Yajaira: “Mifoha amin’ny 4.30 maraina eo ho eo izahay, dia manadiodio ny tranonay sy misotro kafe ary mamonjy an’ilay bisy mpitondra anay. Reraka aloha izahay amin’ny hariva e! Fa tsy maninona satria falifaly daholo ny rehetra sady hoatran’ny hoe mihomehy foana izahay.”
Feno ala ny manodidina an’ilay tany any Warwick. Manampy amin’ny fanomanana an’ilay toerana hanaovana fanorenana any i Zach sy Beth vadiny, avy any Minnesota. Hoy i Beth, rehefa nanontaniana hoe maninona izy ireo no nankatỳ: “Mino izahay hoe ny manompo an’i Jehovah no zavatra tsara indrindra azo atao eo amin’ny fiainana, ka te hampiasa an’izay hainay mba hanompoana azy izahay.”
Hizara Hizara Mpiasa An-tsitrapo Manomboka ny Asa Fanorenana any Tuxedo